Su'aalaha La Weydiiyo - Ningbo Pntek Technology Co., Ltd.
PPR filtarka iyo rakibidda
Xirmooyinka CPVC iyo rakibidda
HDPE biibiile iyo rakiban
Qalabka PP iyo qalabka rakiban
Ma u baahan tahay caawimaad? Fadlan nala soo xiriir waqtiga si aan uga jawaabno su'aalahaaga！
S: Waa maxay qiimahaagu?
J: Qiimaheena waa la badali karaa iyadoo ku xiran hadba sahayda iyo waxyaabaha kale ee suuqa ka jira. Waxaan kuu soo diri doonnaa liis qiimeyn casriyeysan ka dib shirkaddaada nala soo xiriir si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
S: Ma haysaa tirada ugu yar ee dalab ah?
J: Haa, waxaan ubaahanahay dhamaan amarrada caalamiga ah inay lahaadaan amarka ugu yar ee socda. Haddii aad raadineyso inaad dib u iibiso laakiin tiro aad u yar, waxaan kugula talineynaa inaad hubiso degelkeenna.
S: Ma bixin kartaa dukumintiyada ku habboon?
J: Haa, waxaan ku bixin karnaa dukumiintiyada badankood oo ay ku jiraan Shahaadooyinka Falanqaynta / Waxqabadka; Caymis; Asalka, iyo dukumiintiyada kale ee dhoofinta halka looga baahdo.
S: Waa maxay celceliska waqtiga hoggaaminta?
J: Tijaabooyinka, waqtiga hogaamintu waa ilaa 7 maalmood. Soosaarka ballaaran, waqtiga hogaamintu waa 20-30 maalmood kadib helitaanka lacagta deebaajiga. Waqtiyada hogaamintu waxay dhaqan galayaan markii (1) aan helnay deebaajigaagii, iyo (2) aan helno ogolaanshahaagii ugu dambeeyay ee alaabadaada. Haddii waqtiyadayada hogaamintu aysan la shaqeynin waqtigaaga ugu dambeeya, fadlan ka gudub shuruudahaaga iibkaaga. Xaaladaha oo dhan waxaan isku dayi doonnaa in aan meel dhigno baahiyahaaga. Xaaladaha badankood waan awoodnaa inaan sidaas yeelno.
S: Noocee ah qaababka lacag bixinta ee aad aqbasho?
J: Waxaad ku bixin kartaa lacagta koontadayada bangiga, Western Union ama PayPal: 30% horay u dhig, 70% dheelitir ah oo ka dhan ah nuqulka B / L.
S: Waa maxay dammaanadda alaabtu?
J: Waxaan damaanad qaadeynaa agabkeena iyo shaqadeena. Balanteenu waa qanacsanaantaada alaabtayada. Dammaanad ama maya, waa dhaqanka shirkadeena inay wax ka qabato oo ay xalliso dhammaan arrimaha macaamiisha si qof walba ugu qanco.
S: Ma dammaanad qaadeysaa inaad si ammaan ah oo ammaan ah u gaarsiiso alaabooyinka?
J: Haa, marwalba waxaan isticmaalnaa baakadaha dhoofinta oo tayo sare leh. Waxaan sidoo kale u adeegsannaa xirxirida halista khaaska ah alaabooyinka halista ah iyo xaqiijinta rakibayaasha qaboojinta alaabada xasaasiga ah Baakadaha takhasuska leh iyo shuruudaha xirxirida aan caadiga ahayn ayaa laga yaabaa inay qaadaan lacag dheeraad ah.
S: Sidee ku saabsan khidmadaha maraakiibta?
J: Qiimaha dhoofintu wuxuu kuxiran yahay habka aad dooratay inaad alaabta ku hesho. Express waa sida ugu dhaqsaha badan laakiin sidoo kale habka ugu qaalisan. Xeerarka badda waa xalka ugu fiican ee qaddarka badan. Si sax ah sicirka xamuulka waxaan ku siin karnaa oo keliya haddii aan ogaanno faahfaahinta xaddiga, miisaanka iyo habka. Fadlan nala soo xiriir si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Dhuumaha dhulka hoostiisa mara
Nidaamka Bixinta Biyaha
Cinwaanka:Magaalada Hengjie, Degmada Haishu, Ningbo Zhejiang, Shiinaha